Marina Ny Voalazan’I Donald Trump Fa Milalao Afo Ny Iraniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Marsa 2017 4:56 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, বাংলা, Ελληνικά, Swahili, македонски, Aymara, English
Mpaka sary ao Tehran Fatemeh Behboudi nahazo sary ny fankalazana ny Chaharshanbeh Suri teo an-dalamben'ny Tehran tamin'ny 16 Martsa 2016. Jereo ny sary maro hafa ao amin'ny pejiny Instagram .
Manaporofo ny fetiben'ny afo Iraniana fahiny izay fantatra amin'ny anarana hoe Chaharshanbe Suri, fa tena marina tokoa ny voalazan’ i Donald Trump, na dia tsy nahy aza no niampangany an'Iran ho “milalao afo” tamin'ny volana lasa.
Tany am-piandohan'ny volana Febroary, nandefa sioka feno fandrangitana vitsivitsy momba an'Iran ny Filoha Amerikana Trump, taorian'ny namoahany didim-panjakana mandrara ny olom-pirenena Iraniana (ankoatra ireo hafa) amin'ny fandehanana any Etazonia.
Milalao afo i Iran – tsy nahay nankasitraka ny “hatsaram-panahin'” ny Filoha Obama izy ireo. Fa tsy izaho!
Nitsikera ny politikan'ny fifanatonana tamin'i Iran nataon'ny Filoha teo aloha Barack Obama i Trump, izay nahatonga ny fifanarahana momba ny fitaovam-piadiana nokleary sy ny fanafoanana ny sazin'Iran maromaro.
Tamin'ny faran'ny volana Janoary, nanomboka ny andrana fitifirana balafomanga i Iran izay tonga hatrany amin'ny 900 kilaometatra, toa hitsapana ny tenin'ny Filoha Trump tamin'ny fampanantenana ny fifanarahana nokleary amin'ny Iraniana izany, izay manome fahafahana ho an'Iran hanao andrana fitifirana balafomanga .
NAHAZO FAMPITANDREMANA tamin'ny fitifirana balafomanga mahery vaika i Iran. Tokony nankasitraka noho ny fifanarahana mampatahotra nataon'ny Etazonia niaraka taminy!
An-tserasera, nahafaly ireo maro mahafantatra tsara ny Chaharshanbe Suri, ilay “Fetiben'ny Afo Persianina,” ny fampiasan'i Trump ny teny hoe “milalao afo”, izay fomba nentim-paharazana Iraniana hankalazaina ny alin'ny Alarobia alohan'ny taombaovao Iraniana .
Tsy marina ny filazan'iTrump momba an'i Iran milalao afo, tsy alohan'ny volana Martsa. 🔥 🇮🇷 ny Chaharshanbe Suri.
@realDonaldTrump ilay tsivanona ity, fantatrao ve ny chaharshanbe Suri?
Tsy milalao izahay fa mitsambikina azy.
Mba indray mandeha teo amin'ny fiainanao ianao no nisioka marina! MILALAO afo tokoa izahay ! izany no atao hoe Chaharshanbe Suri ary fomban-drazana mahafinaritra fahiny. 🔥 🇮🇷
Manomboka amin'ny fiandohan'ny lohataona ny fanisanandro Iraniana any amin'ny Ilabolantany Avaratra, tamin'ny 21 Martsa. Manomboka ny harivan'ny Alarobia farany amin'ny taona kosa ny fankalazana ny Taombaovao, izay ahitana ny olona mandrehitra afo sy mitsambikina eo ambonin'ny afo, ary mandefa afomanga.
Rehefa mitsambikina eo ambonin'ny afo ireo olona mifety dia hoy izy ireo hoe:
Alaivo ny mavomavoko, omeo ahy ny menanao.
Raha hadika amin'ny teny hafa dia midika hoe: «Esory ny fahalemeko ary omeo ahy ny herinao.” Maneho fanantenana hahazo fanambinana amin'ny taombaovao io andian-teny io.
Amin'ny ankapobeny, “milalao afo” ny Iraniana, mba hanadio ny tenany tamin'ny enta-mavesatry ny taon-dasa, ary manantena ny fanombohan'ny taona vaovao. Noho ny fitondram-panjakana vaovao mijoro ao Washington, tsy maintsy ho tena malaza ao Iran amin'ity taona ity ny Chaharshanbe Suri.